KFO: Ajjeechaan Seeraan Alaa Qaama Mootummaatiin Fudhatamaa Jiru Hatattamaan Dhaabbachu Qaba – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKFO: Ajjeechaan Seeraan Alaa Qaama Mootummaatiin Fudhatamaa Jiru Hatattamaan Dhaabbachu Qaba
a) Godina Gujii aanaa Gooroo Doollaa keessatti mobaalii keetu wal gahii keessatti nutti iyye jedhamee humni mootummaa wal gahii sana geggeessa ture dargaggoo tokko fuula namoota wal gahii taa’an duratti ajjeeseera.
b) Godina Wallagga Bahaa magaala Naqamtee keessatti dargaggoota wal bira ta’anii taphataa jiranu humni mootummaa ol itti seenee ajjeesee meeshaa waraana bira ka’ee suura kaaseera.
c) Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asaabii haatii ijoollee afurii Amsaaluu Guddataa odoo maasii keessaa hojjettuu humna mootummaatiin ajjeefamtee ti.
d) Artisti Haacaaluun qaama/nama hanga yoonatti abalu jedhamee hin dubbatamneen ajjeefamee firootisaa magaalaa Amboo, godina Shawaa Lixaa keessa gadda ta’aanii utuu jiranu humni mootummaa dhukaasa banee ajjeechaa raawwateera.
e) Achuma godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamee, ajjeefamusa qofa odoo hin taanee akka hin-awwalamne dhorkameera.
f) Ammas godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama sangaatti camadani qotaniiru.
g) Dargaggoo Kadiroo Biraanuu, Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaphoo keessatti manaa gadi waamamee ija haadha isa deesse/dhalte duratti humna mootummaatiin ajjeefameera.
h) Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti namoota to’annoo seeraa jala jiranu buufata poolisii keessa gadi baasani ajjeesaniiru.
ODUU Hatattama KFON Abiy Gocha badii isaf akka fanifamu itii muruf jiru kfon Abiy saxile|Moha Oromo
No more manipulating ethiopinism & orthodoxy for despotic amharanized goal says: